Vocational Training | YOUTH International College Myanmar
Alternate Education for Your Success
သင်တန်းကာလ - (၂)လ
SYSTEM & NETWORK ESSENTIALS
ဒီနေ့ခေတ်မှာ Pratical A+ ဟာ အခြေခံသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီသင်တန်းဟာ ကွန်ပျူတာရဲ့ နိယာမ Principles များကို ထည့်သွင်းသင်ကြားတာဖြစ်သောကြောင့် ICT နည်းပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလိုသူများသာမက ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနေရသူတိုင်း မဖြစ်မနေတတ်သင့်သော ICT Fundamental သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ Comp TIA A + သင်ရိုးပေးထားတာကြောင့် သင်တန်းပြီးဆုံးလျှင် နိုင်ငံတကာ A+ Technician တစ်ယောက်၏အရည်အသွေးအတိုင်းလုပ်ငန်းခွင် ၀င်နိုင်မည့်အပြင် Computer Networking ကိုပါ နားလည်စေရန် အခြေခံ Network ပိုင်းကိုပါ ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးထားပါသည်။ ထို့အပြင် ဖုန်းဆိုင်များတွင်ပါအလုပ်လုပ်နိုင်ရန် Andriod Phone Software အခြေခံကိုပါ ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးထားပါသည်။ ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ အစိတ်အပိုင်းများ၏ သီအိုရီများကို အသေးစိတ်သင်ကြားခြင်း၊ ကွန်ပျူတာပျက်လျှင် ပြင်တတ်စေရန် Troubleshoot လုပ်တတ်စေရန်၊ Thinking လုပ်တတ်စေရန် လိုအပ်သော သီအိုရီများကို သင်ကြားခြင်း ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးကို လက်တွေ့ တပ်ဆင်ခြင်း၊ System များကို Install လုပ်ခြင်း၊ Windows System ပိုင်းကို သင်ကြားခြင်း ပရင်တာများအကြောင်းသင်ကြားခြင်း၊ Anti Virus အကြောင်းများသင်ကြားခြင်း နှင့် နောက်ထပ် အများကြီး အသေးစိတ် သင်ကြားပေးပါသည်။
Course Structure Read More...
PC Parts Assemble
POST Code & Beep Error
PC Components Details
PC & Principles
CPU & Types of CPU
Chipsets & Functions
Variety of DRAM
FSB , BSB & Bus
Windows7& 8 Installation / Backup
Scanddisk & Disk Defragement
User profile & Virtual Memory
Control Panel Detials
User Accont Administration
Partition Magic Vs EASEUS
Deep Freeze & Hiren’s Boot
Basic Managing Andriod and many more……
သင်တန်းကာလ - (၄) လ
ဒီသင်တန်းမှာ အဓိကအားဖြင့် Domain Model ( Enterprise Level) ကို သင်ကြားတယ်ဆိုပေမယ့် အခြေခံ Workgroup Network ကနေစတင်သင်ကြားပေးတာကြောင့် အခုမှ Network ကို စလေ့လာမယ့်သူတွေလည်း တတ်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ Network Fundamentals ကနေ အဆင့်မြင့် အထိ သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် ယနေ့ခေတ်မသိမဖြစ်သိရမယ့် Wireless သင်ခန်းစာကို Indoor ရော Outdoor ပါသင်ကြားပေးမှာပါ။ နောက်ပြီး အခြားမှာ သင်နေကြတဲ့ N+ သင်တန်းမှာ သင်သော Network + သင်ခန်းစာများလည်း္ပဤသင်တန်းတွင်ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ယနေ့ခေတ်မှာ Network Engineer တစ်ယောက်အနေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန် အပြည့်အစုံဆုံးဖွဲ့စည်းပေးထားသော သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် MCSA, MCSE, CCNA, CCNP သင်တန်းများအတွက်လ်ညး အခြေခံကောင်းများရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Network Fundamentals, Workgroup (Peer) Network
Ethernet Network, Structure Cable Installation with Patch Panel
Wireless LAN, Ad Hoc, Managing Wireless Router,
Access Point ( Indoor Unit)
CPE Devices ( Outdoor with Waterproof)
Wireless Antenna ( Omini & Direction)
Server 2008 / 2012 Installation
Installation & Configuring Active Directory, Joining to Domain
Server Administering such as Accounts & Policy
Comp TIA Network + @ N + Including OSI Model
IP Addressing , Simple & Advance Subnetting , IPV6
DHCP Server, DHCP Relay Agent,
ICS, NAT ( Network Address Translation)
VPOP3Mail Saver, Web Server
VPN ( Virtual Private Network ) Server
DFS, FRS Server
Hyper – V (Virtualization)
Disk Management, System RAID, Hardware RAID with Dell R610 Server
ဒီသင်တန်းကို တတ်ပြီးလျှင် SME( Small & Medium Enterprise) များစသည့် IT နှင့် Non-IT (ဥပမာ- ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဆေးရုံး၊ စက်ရုံ၊ ဘဏ်၊ လေကြောင်းလိုင်း etc..,) လုပ်ငန်းကြီးများတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ Network Administractor / Network Engineer အနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အထူးရေပန်းစားပြီး လူငယ်များအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် မဖြစ်မနေတတ်သင့်သော သင်တန်း။
မြန်မာပြည်၏ ပထမဦးဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသော Ciso အသိအမှတ်ပြု Cisco Learning Partner Cisco အသိအမှတ်ပြု Cisco Certified Trainer ဆရာဇော်လင်း (ID-34928) ကိုယ်တိုင်ဦးစီးသင်ကြားသည်။ Cisco Learning Partner ဖြစ်သော YOUTH Computer တွင်သင်တန်းတတ်သော Cisco သင်တန်းသားများ သင်တန်းပြီးဆုံးလျှင် Cisco မှ ချီးမြှင့်သော Completion Certificate ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
OSI Model & TCP Model
TCP / IP in Details
Getting Started CLI
IPv4Addressing
Subnetting Vs supernetting / CIDR
Conserver IP Address with VLSM
Static Routes, Default Routes
Routing and Routed Protocol
Dynamic Routing in Details
First Hop Routing Protocol
VPN with GRE
History of Network Equipment
Repeater & Bridge, Hub Vs Switch
Virtual LAN in Details
Trunking , VTP & Inter VLAN
STP Enhancements & Etherchannel
Static & Dynamic NAT
Wide Area Network in Details
Point to Point Protocol (HDLC, PPP)
QOS (Quility of Service)
Understanding IPv6 / IPng
Anycast Vs ARP Broadcast
Intensive Exam Training
Chellenge Labs and Many more…
Cisco Certification များသည် မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံတက္ပာ၌ အထူးရေပန်းစားလှပြီး လစာမြင့်မားစွာ ရရှိစေနိုင်သည့် Certification များဖြစ်ပါသည်။
YOUTH Computer သည် Cisco System ,Inc ၏ White List စာရင်းဝင် Learning Partner ဖြစ်သောကြောင့် Cisco မှတိုက်ရိုက် ပံ့ပိုးပေးသော Routing & Switching အပြင် Cisco Wireless, Security , Voice , CCDA စသည့် နယ်ပယ်စုံအတွက် သင်ရိုးညွန်းတမ်းများကို လက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ သင်၏သူငယ်ချင်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ သင့်သားသမီးအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပ္ပဏီဝန်ထမ်းများအုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေ ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် သင်တန်းအပ်နှံနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကာလ - (၃) လ
Cisco Certified Network Professional (CCNP Route)
( Planning, OSPF, EIGRP, Path Control, BGP, IPv6)
သင်တန်းကာလ - (၅) လ
( Security Threats, Managing Secure Network, AAA, firewall Technologies, Intrusion Prevention, Cryptography, VPN, Cisco ASA)
Cisco, Microsoft, Linux, CEH, etc., အစရှိသည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများ YOUTH Test Center တွင် ဖြေဆိုနိုင်ပါပြီ။ မြန်မာ့ပြည်၏ ပထမဆုံးသော CPA Exam များဖြေဆိုနိုင်သည့် Test Center လည်းဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကာလ - (၂) လစီ
YMG Mobile Training (Hardware & Software)
Mobile Phone ဆိုင်ဖွင့်လိုသူများ၊ Mobile Service Technician ဖြစ်လိုသူများ ၊ Mobile Phone ကိုစိတ်ပါဝင်စားသူများ တတ်ရောင်သင့်သော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ကွန်ပျူတာအရောင်းဆိုင်များသည်လည်း Mobile Handset များတွဲရောင်းခြင်း၊ Service ပေးလာခြင်းတို့ကြောင့် Mobile Phone Hardware နှင့် Software ၂ မျိုးစလုံးတတ်ရောက်သော သင်တန်းသားများကို Pratical A+ သင်တန်းကို value Added Course အဖြစ်အခမဲ့ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်သော သင်ထောက်ကူပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ စာတွေ့နှင့် လက်တွေ့မျှတစွာ သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးလျှင် ဆိုင်ပြန်ဖွင့်နိုင်ရန် အတွက် လိုအပ်သော အကူအညီများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ လိုအပ်သော Software များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
1.Mobile Hardware Training (Basic Electronic , GSM, CDMA 450, 800 Handset Repairing, IC & Parts Testing, PCB Board , Fix / China Phone , M/ Board Tracing & Troubleshoot)
2.	Mobile Software Training (ADB Command, Software Installation, Firmware Installation, Backup & Restore, Dead Boot Error, iOS Firmware Restore, Create Apple ID)
© 2016-2021 YOUTH International College Myanmar. All rights reserved.
Web Generator by NetScriper